Gerard Pique oo ka jawaab celiyay wararka xanta ah ee ku aadan inuu khilaaf kala dhexeeyo Lionel Messi – Gool FM
Gerard Pique oo ka jawaab celiyay wararka xanta ah ee ku aadan inuu khilaaf kala dhexeeyo Lionel Messi
Dajiye October 5, 2018
(Barcelona) 05 Okt 2018. Difaaca kooxda Barcelona ee Gerard Pique ayaa go’aansaday inuu ka jawaabo wararka xanta ah ee sheegaya inuu jiro khilaaf xoogan ee kala dhexeeya kabtanka kooxda Blaugrana ee Lionel Messi maalmihii lasoo dhaafay.
Kadib guuldaradii Barcelona kaga soo gaartay kooxda Leganes horyaalka La Liga ee dalka Spain, waxaa soo baxay warar shaacinaya in Messi uu ka carooday qaab ciyaareedka Gerard Pique ee sabab u noqday in Blaugrana tan iyo bilawga xili ciyaareedkan looga dhaliyay goolal badan.
Gerard Pique ayaa soo dhigay bartiisa Twitter-ka sawirka isaga iyo Lionel Messi si uu jawaab celin kaga dhigo, dhamaan wararka xanta ah ee ku aadan kiiskan, isla markaana uu u beeniyo.
Horaantii isbuucaan, barnaamijka teleefishinka dalka Spain ee “Chiringuito” ayaa sheegay in xiriirka Messi iyo Gerard Pique uusan wanaagsaneen, sababa la xiriira qaab ciyaardka Pique.
Si kastaba jawaab celinta Pique ayaa waxay imaaneysaa kadib guushii 4-2 ahayd ay kaga gaareen Tottenham Hotspur tartanka UEFA Champions League Wembley Stadium.
Hazard oo soo diray MUUQAAL uu ku Caddeynayo SABABTA uu u joojiyay Dabaal Degan....(DAAWO)
Klopp oo la wadaagay Jamaahiirta Liverpool war farxad leh ee ku aadan xaalada dhaawac ee Naby Keita